Sida loo sawiro Instagram looga soo qaado kombuyuutarka: Sharax tallaabo-tallaabo | Wararka Gadget
Eder Esteban | | shabakadaha bulshada, Tababarada
Instagram waxaa loo caleemo saaray inuu yahay mid ka mid ah codsiyada ugu caansan adduunka. Shabakada bulsheed waxay leedahay malaayiin isticmaale, marka lagu daro sii wadida inay ku koraan heer wanaagsan waqtiga. Markii ugu horreysay, shabakaddan bulsheed waxay ku dhalatay codsi taleefannada gacanta ah. In kasta oo markii dambe qaabkii web-ka ahaa la abuuray. Maxaa u oggolaanaya daalacashada kombiyuutarka ku dhex jira.
Waxyar in yar oo hawlo dheeri ah ayaa lagu soo kordhiyay qaybtan boggan ah 'Instagram' Xaqiiqdii waa midda ay tahay in la isticmaalo haddii aad rabto inaad tirtirto koontada. Mid ka mid ah shaqooyinka lagu soo bandhigay isla waa suurtagalnimada soo dejinta sawirro. Sidaa darteed, waxaad kumbuyuutar ka soo gali kartaa sawirro cinwaankaaga.
Waa shaqo faa'iido badan u yeelan karta marar badan. Sidaas darteed haddii aadan haysan taleefanka kuugu dhow, ama haddii sawirka aad rabto inaad geliso uu ku kaydsan yahay kombuyuutarkaaga, adeegsiga adeeggan wuxuu noqon karaa mid aad u habboon. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado habka ay suurtagalnimadan ugu shaqeyso barta Instagram. Hoos waxaan kuugu sheegi doonaa wax walba oo ku saabsan habka aad sawirrada ugu soo rogi karto shabakadda bulshada nooca desktop-ka.
1 Sawirrada ugu soo rar Instagram-ka kombuyuutarka
1.1 Sawirrada ka soo rar kombuyuutarka illaa Instagram: Talaabooyinka
2 Kala duwanaanshaha ka soo dejinta casriga
Sawirrada ugu soo rar Instagram-ka kombuyuutarka
Sida macquul ahaan ah, waxa ugu horreeya ee la sameeyo ayaa ah gala bogga shabakadda bulshada, link this. Waa inaad gasho koontada isticmaalaha, haddiiba uusan jirin kalfadhi bilow ah. Marka kalfadhiga lagu bilaabo shabakada bulshada, waa inaad gashaa astaanta isticmaalaha. Waxaa lagu sameeyaa adigoo gujinaya astaanta muuqaalka qofka ee midigta kore. Waa astaanta saddexaad ee bidixda. Waxa kale oo aad riixi kartaa magaca isticmaalaha ee ka muuqda dhinaca midig ee shaashadda. Labada ikhtiyaarba waxay nagu hogaaminayaan astaanta. Marka waan bilaabi karnaa.
Marka, markii aan horeyba ugu jirnay astaanta, waxaan eegaynaa astaamaha u muuqda midigta magaca isticmaale. Halkan waxaad ka arki kartaa taas astaanta midigta fog waa kamarad sawir leh dhowr karbaash oo midab leh, oo calaamadda + ku leh midigta hoose. Kani waa astaanta ay tahay inaan ku cadaadinno si aan awood ugu siino inaan sawirro kaga soo dhigno kombuyuutarka Instagram-ka. Marka markaan gujino, howsha soo dejinta sawir la yiraahdo oo aan dooneyno inaan ku shubno shabakada bulshada ayaa bilaabmaysa. Tallaabooyinka la raacayo ayaa lagu muujiyey hoos.
Sawirrada ka soo rar kombuyuutarka illaa Instagram: Talaabooyinka
Markaan gujino astaantaan, waxa ugu horreeya ee nala weydiisto waa haddii aan rabno inaan sawirkan ku darno astaanta ama sheekooyinka. Isticmaal kastaa waa inuu doortaa ikhtiyaarka iyaga xiiseynaya. Xaaladdan oo kale, waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan sawir ku galno astaanteenna Instagram. Sidaa darteed, waxaan ku xulannaa ikhtiyaarkaas shaashadda. Kani waa badhanka ka muuqda buluuga shaashadda.
Marka xigta, daaqad ayaa ka furi doonta shaashadda aan ku khasban nahay dooro sawirka aan dooneyno inaan ku dhigno barta Instagram. Tani waxay la mid tahay markaan rabno inaan sawirro ku soo roganno bogga internetka ama aan ku dirno boostada. Sidaa darteed, waxa inala gudboon waa inaan tagno goobta kumbuyuutarka uu ku yaal sawirka sawirka aan ka hadlayno ee aan rabno inaan ku dhigno astaanteenna. Marka waxaan u isticmaalnaa faylka baaraha si aan ugu tagno goobtaas gaarka ah. Markii aan helnay sawirka, waa inaad gujisaa oo aad garaacdaa badhanka furan ee daaqaddaas.
Marka sawirka la doorto, sawirkani wuxuu ka muuqan doonaa shaashadaada barta Instagram. Tallaabada ugu horreysa ee la bixiyo waa in la isku hagaajiyo cabirkeeda. Si ay ugu habboon tahay cabbirka sawirka aan ka helno shabakadda bulshada. Sidaa darteed, waa inaan gooyno oo aan hagaajino iyadoo kuxiran waxa aan dooneyno. Kadib waxaan ku siin karnaa waxyaabaha soo socda, halka aan ka sii wadi karno diyaarinta daabacaadda sawirka la yiri.
Tallaabada xigta waan awoodnaa ka dib qor qoraalka aan dooneyno inaan ku dhigno daabacaadda sawirka in our profile. Waad gali kartaa qoraalka iyo hashtags haddii aad rabto inaad isticmaasho. Sidan oo kale, sawirku mar hore ayuu diyaar noqon lahaa. Markii aan gujino marka xigta, sawirka la yiraahdo waxaa lagu daabici doonaa astaantayada shabakadda bulshada ee caanka ah si toos ah. Hawshu hadda way dhammaatay. Sawirka waxaa horey loogu arki karaa astaanta. Marka taageerayaasheena way arki karaan, jeclaan karaan ama uga tagi karaan faallooyin wakhti kasta.
Kala duwanaanshaha ka soo dejinta casriga
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho Instagram, waxaad ogaan doontaa inay jiraan cad farqiga u dhexeeya geeddi-socodka sawir laga soo qaadanayo kombuyuutarka. Isbedelka ugu weyn ayaa ah haddii aan sawir ka soo qaadno kumbuyuutarka, ma jiraan wax ikhtiyaarro ah oo tafatir ah oo loogu talagalay sawirkaas. Haddii aad sawir ka soo qaadatid taleefankaaga casriga ah shabakadda bulshada, waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo wax lagu beddelo.
Marka lagu daro cabbirka sawirka, waa suurtagal in lagu daro shaandhooyin si loo helo saameynta la rabo. Marka sawirkaas si weyn ayaa wax looga beddeli karaa. Laakiin tani macquul maahan (ugu yaraan weli ma ahan) nooca PC-ka ee 'Instagram'. Waxa kaliya ee lagu sameyn karo kiiskan waa in la isku hagaajiyo cabirka sawirka aad rabto inaad geliso. Laakiin ma jiro ikhtiyaar kale oo lagu hagaajiyo sawirka, lagu soo bandhigo miirayaal ama wax isbeddel ah lagu sameeyo, taas oo ku jirta nooca asalka ah.
11 khiyaanooyin si loogu helo taageerayaal badan barta Instagram
Sidaa darteed, in kasta oo sawir laga soo gelinayo Instagram-ka nooca PC-ga ah ay fududahay, ka sokow inuu waxtar badan leeyahay, haddana isku mid ma aha. Marka isticmaaleyaashaas xiiseynaya inay awoodaan inay wax ka beddelaan sawirka la sheegay, waa inaad tan tixgelisaa. Maaddaama haddii aad rabto inaad awood u yeelatid inaad ku dhejiso miiraha sawirka su'aasha ku jirta, markaa waa inaad isticmaashaa gelinta sawirrada taleefanka casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » shabakadaha bulshada » Sida sawirada looga soo galiyo Instagram kombiyuutarka
Falanqaynta iyo astaamaha AOC C24G1 kormeeraha ciyaarta